I-IETT iseka iZiko Lezothutho lwaBaqhubi | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulI-IETT iseka iZiko Lezothutho kubaqhubi
27 / 11 / 2019 34 Istanbul, IETT, JIKELELE, Highway, AMAZIKO, Systems Wheel Wheel, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, ETURKEY
iett iseka iziko lezothutho lemfundo ethambileyo
Ngokuhambelana nesivumelwano esenziwe phakathi kwe-UGETAM ne-IETT, kuya kubonelelwa ngoqeqesho kunye nokuqinisekiswa kwabo bonke abaqhubi, ngakumbi abasebenzi be-IETT. Kwiziko lemfundo eliza kusekwa, zonke iingcali zezothutho kwilizwe liphela ziya kuqeqeshwa kwangexesha.
I-IETT kunye ne-UGETAM, amahlakani kamasipala wase-Istanbul Metropolitan, baqala ukusebenza ekumiselweni kweZiko leZothutho ukuze babonelele ngoqeqesho lwengqondo nolusebenzayo kubaqhubi abakhonza kwicandelo lezothutho lukawonke-wonke, kunye nokwenza iinkqubo zokulinganisa, zokuvavanya kunye nezokuqinisekisa.
Phakathi kwe-IETT kunye ne-UGETAM, eyenza uzinzo lube yenye yeenjongo eziphambili zokuhamba kwabantu 'UTSHINTSHO LWEZOTHUTHO' kwafikelelwa kwisivumelwano ukuze kusayinwe umgaqo.
Kwiziko lemfundo eliza kusekwa kwisithili sase-Arnavutköy, kuqeqeshelwa izithuthi zikawonke-wonke, iiloliwe zokuqhuba, ukuhamba ngemoto ngoqeqesho, umgama omde, ukuqeqeshwa ngokuhamba ngemoto, izicelo zonyango lwezengqondo.
Uloliwe oza kubonelelwa kwiZiko lezoThutho zijolise ekuqeqesheni abaqhubi abanolwazi ngakumbi kwizithuthi, ukuphuhlisa inkcubeko yezothutho lukawonkewonke, kuncitshiswe inani leengozi kunye nokubonelela ukonga ipetroli. Ukongeza kuqeqesho kunye nasekuqinisekiseni abaqhubi, iAkhademi ikwajolise ekuphuhliseni itekhnoloji yezothutho, ukwenza imigaqo-nkqubo mitsha yokuhamba yokunciphisa ukuxinana kweemoto, kuze ke kunciphise ukuphuma kunye nokungcolisa komoya okuncinci.
Kwinqanaba lokuqala, i-IETT, i-Otobüs AŞ kunye nabaqhubi beeBhasi bakaRhulumente babucala bayaqeqeshwa. Kwinqanaba lesibini, kujolise ekukhutshweni kweenkqubo zesatifikethi zeminibus kunye neeteksi, abaqhubi bezithuthi ezidolophini kunye nezithuthi zokwenza umhlaba, abagqatswa abatsha, abaqhubi bezithuthi ezingekho ezindleleni nabaqhubi bezithuthuthu. Kwinqanaba lokugqibela, kucwangcisiwe ukubonelela ngeenkonzo kubaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke ngaphandle kweIstanbul, ubudlelwane kunye nabagibeli bamazwe aphesheya.
Imiselwe kwi-1996 nguMasipala wase-Istanbul Metropolitan, Istanbul Appared Irhasi kunye neTekhnoloji yeTekhnoloji yoPhando lwezobuNjineli boRhwebo Inc. I-UGETAM ineGunya loGunyaziso lweeMfanelo zokuSebenza (i-VQA) ngesatifikethi esifunyenwe kwi-Arhente yaseburhulumenteni yaseTurkey (TÜRKAK).
Ukuqeqeshwa kunikwe abaqhubi baseDüzce
Ukuqeqeshwa kwesiNgesi kwabaqhubi baqala eMuğla
Imigangatho ye-EU yokuQeqeshelwa ukuqeqesha abaqhubi e-Elazig
I-Seminar yabaqhubi be-Van Metropolitan Municipality
ISatifikethi sokuxabisa kuMeya Yılmaz ukuya kubaqhubi Ukulondoloza Ubomi
Ezolawulo kunye nomsindo kulawulo lwabaqhubi kubaqhubi eKocaeli…
I-Plaque evela kuMongameli Çelik kwi-Hero Drivers
I-Plaque yeHero Drivers ukusuka eKocaeli Metropolitan
Isenzo esivela kuMongameli kuMlomo kubaTshali bamakhosikazi
U-Oğuz Arda Sel, ophulukene nobomi bakhe e-Çorlu Tragency ngengozi ...
Ekukhunjuleni kuka-Oğuz Arda osweleke kwingozi kaloliwe, Ibhola yeBhola
I-3 ye-DHMİ ye-Aviation Academy. Ukubhiyozelwa
I-Kayseri Transportation Inc. Ukuseka inkqubo yoCwangciso loShishino
Umqhubi oPhumeleleyo wabafazi baseMuğla Metropolitan ın
Umphathi weCandelo loMqhubi weNyanga kuMvuzo weHero Driver